Minecraft တူသော PUBG | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android ဂိမ်းများ, Minecraft, PUBG မိုဘိုင်း, လဲ tutorial
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်၌အများဆုံးဖြန့်ချိသည့်သတင်းသည်ပွဲသို့တရားဝင်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ Android terminal များအတွက် PUBG Mobile, အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲအဘို့အအောင်မြင်ခဲ့သောဂိမ်း, \_ t Player ကိုအမည်မသိရဲ့စစ်မြေပြင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကို Androidsis မှာအများကြီးသီးသန့်တင်ထားတယ်၊ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးသို့မရောက်မီတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ရန် apk.
Android အတွက် PUBG ဂိမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်၊ နောက်ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည် Android အတွက်ရိုးရှင်းသောဂိမ်းကိုစင်ကြယ်စေရန်အကြံပြုချင်သောအကြောင်းဖြစ်သည်။ PUBG စတိုင်သည် Minecraft ကမ္ဘာနှင့်ဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်းနှင့်ပေါင်းစပ်သည်.
ငါပြောနေတာဂိမ်း, ahစင်ကြယ်သော Minecraft စတိုင်နှင့်အတူ pixelated ဒီဇိုင်းနှင့်အတူဂိမ်း, သည် Google Play Store မှနာမည်အောက်ရှိတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Pixel ၏မသိသောတိုက်ပွဲ။ ငါထင်ပိုဖော်ပြရန်မဖြစ်နိုင် !!
1 Pixel's Unknown Battle Ground ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 အခမဲ့ပေမယ့်ဂန္ In-app ကိုဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ
3 Pixel ၏အမည်မသိတိုက်ပွဲမြေပြင်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်
Pixel's Unknown Battle Ground ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ရေးသားသူ: Azur Interactive မှဂိမ်းများလီမိတက်
အခမဲ့ပေမယ့်ဂန္ In-app ကိုဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ
ဂိမ်းကအခမဲ့ဖြစ်ပြီးငါတို့တတ်နိုင်လိမ့်မယ်ပေမယ့် မည်သည့်ငွေပေးချေစရာမလိုဘဲဒေါင်းလုပ်ချတပ်ဆင်ပြီးကစားပါ, သင်သတိရရမယ်ဂိမ်းထဲမှာငါတို့ကွဲပြားခြားနားသောလက်နက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအလိုအလျှောက်ရဖို့အဆင့်မြှင့် pack ကိုဝယ်ခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းရှိသည်။
အဆိုပါ In-app ငွေပေးချေမှုသည် ၀.၅၉ ယူရိုမှ ၃.၅၉ ယူရိုအထိရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ဟာကလေးငယ်ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ကစားခွင့်ပေးတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ အိမ်ထဲရှိကလေးငယ်များအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင့်ကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ငါသင်ရှိသည်အကြံပြုပါသည် သင့်ရဲ့ Android မှာအမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးကိုသက်ဝင်စေတယ် မည်သည့်ဝယ်ယူမှုအတွက်စကားဝှက်ကိုသက်ဝင် သင်၏ Android စက်မှလုပ်လိုသည်မှာ
ဂိမ်းစနစ်နှင့်ဇာတ်လမ်း (သို့) mode သည်မူရင်း PUBG မိုဘိုင်းဂိမ်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်စင် Minecraft စတိုင်၌ရှိကြ၏ကး.
ဇာတ်လမ်း၏အခြေခံသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုလူသစ်စုဆောင်းရေးဌာနသို့ပို့ဆောင်သောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအဖွဲ့အစည်းကပြန်ပေးဆွဲခံရသည် ကစားပွဲကိုစတင်ရန်လိုအပ်သောပါဝင်သူများနှင့်ပြည့်နေရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေသည်။
ဆိုက်ရောက်ပြီးတာနဲ့ငါတို့ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အသုံးဝင်မယ့်လက်နက်တွေ၊ ကားတွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေကိုရှာဖွေရလိမ့်မယ် ဂိမ်းထဲမှာကျနော်တို့theရိယာ၌ဆင်းသက်ကြသူကွဲပြားခြားနားသောအစစ်အမှန်ကစားသမားကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအနီအနီရောင်စက်ဝိုင်းကျဉ်းမြောင်းနေစဉ်သင်တန်းသားများကိုအခြားသူများထံမှခိုလှုံရန်သို့မဟုတ်ပုန်းအောင်းဖို့တားဆီး။ နောက်ဆုံးတွင်အချိန်ကုန်ဆုံးပြီးစက်ဝိုင်းပိတ်ချိန်တွင်ရပ်နေသူသည်ဂိမ်းကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်။
PUBG Mobile ၌ရှိသကဲ့သို့, Pixel's Unknown Battle Ground တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းကစားနည်းသုံးမျိုးရှိသည်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကစားခြင်း၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့အတူတကွကစားခြင်းနှင့်တတိယတစ်ခုမှာ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိသော Zombie Mode ၏အမည်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Minecraft ပုံစံ Zombie ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ပါမယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြားပြိုင်ဘက်အစစ်အမှန် mode မှာဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုသော။
တိုတိုမှာ ကျွန်ုပ်၏ရိုးရှင်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ချစ်သော Minecraft စတိုင်နှင့်ကစားသည်။ သတ္တိကိုမဖယ်ရှားနိုင်သည့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာဂိမ်းစနစ်သည်နှာခေါင်းပေါ်တွင်ရိုးရှင်းသော်လည်းဂိမ်းသည်အလွန်အလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်နက်များတွင်မတူညီသောလက်နက်အမြောက်အများရှိသည်။ တင့်ကားများနှင့်ကြီးမားသောမြေပုံများကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အချိန်အကန့်အသတ်နှင့်အသက်ရှင်ရန်ကြိုးစား။ ကျွန်ုပ်တို့အားအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမပေးသောစက်ဝိုင်းနီများပါ ၀ င်သည်။
ဂိမ်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းသည်မူလ PUBG Mobile နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ (နှင့်ငါက၎င်း၏ developer များကရည်ရွယ်ကြသည်ထင်ကြဘူး), အရာ၌ ဤနေရာ၌မူရင်းဂိမ်းမှပေါ်ထွက်လာသောတင်းမာမှုသည်သင်အနည်းငယ်ရယ်မောရသောအချိန်များကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိလာသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့တက်ကြွတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအပြည့်အဝရှိနေသေးပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်အဲဒါကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ »aMinecraft PUBG